MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EEYAHA CORGIDOR - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Eeyaha Corgidor
Labrador Retriever / Corgi Dooms Nooc Isku Daran
Annabelle the Corgidor (Labrador Retriever / Corgi mix) oo 12 jir ah— 'Waxaan horey u soo gudbiyay sawir eygeyga Annabelle, oo ah isku darka Lab / Corgi oo aan badbaadinay markii ay jirtay hal sano. Waxaan u waynay ilmaheena macaan inuu kansarka bishii Abriil. Waxay ahayd 12. Nasasho Nabadoonno macaan, waan ku jecelnahay oo kuu xiisnay! (iyo dhagahaas waaweyn iyo lugaha yaryar !!) '
Corgidor ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Corgi . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
sida badan ma miisaanka mastiff dibi
'Corgidorkeennu waa farac hooyada Corgi oo buuxa iyo aabbaha Labrador oo buuxa. Wuxuu ahaa kabasho !! Milkiileyaasha waalidku waxay ahaayeen lab iyo lab. Magaciisu waa Charlie. Wuxuu hayaa hab lagu qoslo oo ku saabsan isaga oo sameeya 'buuq badan'. Charlie waa eeygii ugu codka badnaa ee aan abid lahaan jirnay. Aad uma ciyeyso sida qeylada badan. Isagu waa mid aad iyo aad u saaxiibtinimo badan, isla markaana aad u jecel qof kasta oo uu la xiriiro. Dabadiisa ayaa si joogto ah u ruxaysa! Wuxuu jecelyahay inuu si ula kac ula dhaqmo caruurteenna sidoo kalena ciyaaro. Waxa kale oo uu jecel yahay Labrador-geenna madow, oo isagu meel kasta uu ku jiido qoorteeda. Wuxuu si fiican noogu soo daray gurigeenna dhammaanteenna waan ku faraxsanahay inaan helnay! '
Charlie the Corgidor, oo ah farac ka soo jeeda hooyo Corgi oo buuxda iyo aabe Labrador oo buuxa
Hollywood isugeynta Lab / Corgi ee huruudda ah (Corgidor) oo jirta 15 bilood iyo 33.6 rodol
1 sano jir shaybaar jaalle ah
'Annabelle waa Jaalle Lab / Welsh Corgi isku dar. Annabelle waxaan helnay markii ay jirtay hal sano, maxaa yeelay way lahayd ka carar laga soo bilaabo kuwa aflagaadeeyay, oo waxay ku degtay K-9 Country Club oo ku yaal Ennis, TX. Annabelle ma aqoonin sida loo ciyaaro illaa hal sano, illaa aan soo bandhigo kubbadda cagta iyo barafka. Waxay leedahay wadnaha sheybaarka iyo, sida aan u jecelahay kaftanka, lugaha Corgi. Iyadu gabi ahaanba waa eeygii ugu fiicnaa ee aan abid lahaan jirnay, maxaa yeelay qalbi-wanaaggeeda iyo hamiga ay u qabto inay qof walba ka farxiso. Annabelle aad ayey ugu mahadsantahay inay leedahay qoys jecel oo wax u dhimaya qudhunkeeda, mana ku farxi karto. '
Dinah Washington Powell the Corgidor at 4 sano jir— Hooyadeed waxay ahayd saddex-lable Corgi aabbeheedna wuxuu ahaa Labrador madow. Diinah aad ayey u caqli badan tahay, waxay jeceshahay inay ku noolaato gurigeeda iyada hooyadeed iyo aabbeheed bini aadam waxayna aadeysaa Karmel, Kaliforniya, si ay ugu orodo xeebta. Qof walba oo magaalada jooga wuu garanayaa iyada!
Heidi the Corgidor at 1 sano jir ah iyada toy toy ay buuxiyeen
Pluto the Corgidor (Labrador Retriever / Corgi mix bre eye) 4 bilood jir
3 jir adhijir Jarmal ah
Reba eeygii Corgidor— Waxaan ka soo badbaadinay koonfurta Jersey, inkasta oo ay ku dhalatay South Carolina. Waxay layaab laheyd 3 caruurteena, inkasta oo ay xoogaa nippy tahay. Waxaan diirada saareynaa kahortaga qaniinyada. Waxay si sahal ah ku qaadatay tababarka sateerka waxayna ahayd mid jajaban oo kaliya xishoodka 2 toddobaad kadib markay guriga timaado. Midabkeedu waa iftiin sida shaybaarka jaallaha ah dhismihiisuna wuxuu u muuqdaa mid ka sii badan dhinaca Shaybaarka sidoo kale lugo waaweyn iyo lugaha dhaadheer oo ka dheer kan Corgi. Dabcan dhagaheeda way ka gaaban yihiin sheybaarka iyo xargaha cad ee sankeeda kor u qaadaya kuna dhameeya garbaheeda waa sheeko sheegis Corgi ah. '
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Corgidor
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Reer Brazil
Liiska eeyaha Schipperke Mix Breed
Ayaa u nugul dagaalka, eeyaha labka ah ama eeyaha dhadig?
Doberman Pinscher Dog Sawirada Taranka, 2
Macluumaadka Taranka Ori Pei Dog iyo Sawirro
Koola Tababarka Eyga (Collar Training Collar Collar)
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Glechon
Macluumaadka Taranka Noolaha Dahabka Sammy iyo Sawiro
isku-darka shaybaarka shukulaatada madow
photos of eey buurta bernese
1 sano jir pitbull
sawirka shilinta oo dhiig ka buuxo
Muxuu u eg yahay Terrier-ka manchester?
stern bernard isku darka shaybaarka